Nhau -Kugadzira tekinoroji yemabhodhoro egirazi muindasitiri
Kugadzira tekinoroji yemabhodhoro egirazi muindasitiri
Raw material pretreatment. Pwanya zvinhu zvakakura (jecha requartz, soda, limestone, feldspar, nezvimwewo) uye yakaoma yakanyorova zvinhu. Bvisa iron - ine mbishi zvinhu kuti uve nechokwadi chemhando yegirazi.
Musanganiswa wegirazi unodziyirwa pakupisa kwakanyanya (1550 ~ 1600 ℃) muchoto chebira kana muchoto chedziva kuita girazi remvura rine yunifomu, pasina mabhubhu uye zvinoenderana nezvinodiwa zvekuumba.
Shape. Girazi remvura rinoiswa muforoma kugadzira zvigadzirwa zvegirazi zvechimiro chaunoda, senge mahwendefa, midziyo yakasiyana-siyana, nezvimwe.
Kurapa kwekupisa. Kuburikidza neannealing, quenching uye mamwe maitiro, kushushikana kwemukati kwegirazi kunogona kubviswa kana kugadzirwa, kupatsanurwa kwechikamu kana crystallization, uye chimiro chegirazi chinogona kuchinjwa. Zvakanakira zvegirazi kurongedza midziyo mumunda wezvinwiwa kurongedza.
1. Girazi yekurongedza zvinhu uye midziyo ine zvakawanda zvakanakira: 1. Girazi zvinhu zvine yakanaka chipingamupinyi kuita, inogona kuva yakanaka kwazvo kudzivirira okisijeni uye mamwe magasi kune zviri mukati mekupinda, anogona zvakare kudzivirira zviri mukati meiyo inovhuvhuta zvikamu volatilization mumhepo.
2. Bhodhoro regirazi rinogona kushandiswa zvakare, izvo zvinogona kuderedza mutengo wekurongedza.
3. Girazi rinogona kushandura ruvara uye pachena.
4. Mabhodhoro egirazi akachengeteka uye ane hutsanana, ane ganda rakanaka rekudzivirira uye kupikisa asidi, akakodzera zvinhu zvine acidic (zvakadai sezvinwiwa zvejusi yemiriwo, nezvimwewo) kurongedza.
5.Pamusoro pezvo, nekuti mabhodhoro egirazi anokodzera otomatiki kuzadza tekinoroji uye midziyo yemabhodhoro egirazi muChina yakakura, uye kushandiswa kwemabhodhoro egirazi kurongedza zvinwiwa zvemichero nemichero yemiriwo zvine zvimwe zvakanakira kugadzira muChina. . Kutanga, tinoda kugadzira, kuona uye kugadzira molds. Jecha reQuartz ndicho chinhu chikuru chegirazi, uye zvimwe zvinhu zvekubatsira zvinonyungudutswa kuita mvura pakupisa kwakanyanya. Zvadaro, tinoda kupinza molds, kutonhora, kucheka uye kutsamwa kuti tigadzire mabhodhoro egirazi. Mabhodhoro egirazi anowanzo kunyorwa kuti akaoma, asiwo akaumbwa. Mabhodhoro egirazi nenzira dzekugadzira anogona kukamurwa kuita manyore kuvhuvhuta, mechanika kuvhuvhuta uye extrusion kuumba matatu. Mabhodhoro egirazi akakamurwa kuita sodium girazi, lead girazi uye borosilicate girazi zvinoenderana nekuumbwa kwavo.
Iwo makuru ezvigadzirwa zvemabhodhoro egirazi ndeyechisikigo ore, quartzite, caustic soda, limestone uye zvichingodaro. Mabhodhoro egirazi akajeka zvakanyanya uye asingadzivirirwe nekuora, uye kusangana nemakemikari mazhinji hakuzoshandure zvinhu. Nzira yekugadzira iri nyore. Chimiro chakasununguka uye chinoshanduka. Kuomarara kwepamusoro, kushomeka kwekupisa, kuchena, nyore kuchenesa, kunogona kushandiswa kakawanda. Mabhodhoro egirazi semidziyo yekurongedza anonyanya kushandiswa muchikafu, mafuta, waini, chinwiwa, mwaka, zvizorwa uye zvigadzirwa zvemakemikari emvura, nezvimwewo, zvinoshandiswa zvakanyanya.